सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा दिएन, अब के हुन्छ क्यारेबियन लिग ? Bizshala -
सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा दिएन, अब के हुन्छ क्यारेबियन लिग ?
काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यावसायिक लीगमा ख्याति कमाएका नेपाली क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेले आफूलाई नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले भिसा नदिएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् लामिछानेले वेस्ट इन्डीजमा हुन लागेको क्यारेबियन प्रीमीअर लीग खेल्न जाने क्रममा आफूले अनुरोध गरेको अमेरिकाको प्रवेशाज्ञा नपाएको उल्लेख गरेका हुन्।
उन्नाइस वर्षीय नेपाली स्पिनर लामिछानेले अहिलेसम्म भारत, क्यारेबियन, अफगानिस्तान, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानका व्यावसायिक लीगमा खेलिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अनि राजदूतावासलाई पनि मेन्शन गर्दै लामिछानेले अमेरिकाको प्रवेशाज्ञा नपाउँदा क्यारेबियन लीग खेल्न जान आफूलाई गाह्रो हुने लेखेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, "राष्ट्रिय खेलाडी हुनाको नाताले सन् २०१६ यता आफ्नो देशलाई विश्वभरिका लीगमा प्रतिनिधित्व गर्दैआएको हुनाले मेरो भिसा अस्वीकार गरिँदा म ठूलो आश्चर्यमा परेको छु।"
लगत्तै अर्को ट्वीटमा उनले भिसा अस्वीकार गरिएको जानकारी पाउँदा आफू नि:शब्द भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले सबै कागजपत्रहरू प्रस्तुत गर्दा पनि प्रवेशाज्ञाको आवेदन अस्वीकार गरिएकाले आफूलाई क्यारेबियन लीगमा बार्बेडस ट्राइडन्ट्सका लागि खेल्न गाह्रो हुने उल्लेख गरेका छन्।
ट्विटरको उनको पोस्टमा प्रतिक्रिया लेख्दै कतिपयले कहिलेकाहीँ यस्तो हुने भन्दै सहानुभूति व्यक्त गरेका छन्। केहीले अमेरिकी दूतावासको निर्णयले आफूलाई दु:ख लागेको र यो विषय चाँडै समाधान हुने अपेक्षा गरेको लेखेका छन्।
केहीले भने क्यारेबियन लीग खेल्न जान किन अमेरिकाको भिसा चाहियो भनेर प्रश्न गरेका छन्।
लामिछानेसँग व्यक्तिगत रूपमा पनि नजिक मानिने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रबन्धक रमन शिवाकोटीका अनुसार लामिछाने सेप्टेम्बरको पहिलो साता अमेरिका हुँदै क्यारेबियन जाने तयारीमा छन्। तर अमेरिकाको भिसा नपाउँदा त्यो योजना हुने शिवाकोटी बताउँछन्। उनले भने, "नेपालबाट वेस्ट इन्डीज सीधा जान सम्भव छैन। या त संयुक्त अधिराज्य या अमेरिका हुँदै जानुपर्छ। वेस्ट इन्डीजमा पनि विभिन्न टापुहरूमा खेल हुने भएकाले कहिलेकाहीँ अमेरिका प्रवेश गरेर त्यहाँबाट अर्को उडान भरेर मात्र प्रतियोगितास्थलमा पुग्न सकिन्छ।"
"त्यसबाहेक यसपालि क्यारेबियन लीगका दोस्रो चरणका खेलहरू अमेरिकाको फ्लोरिडामा हुने पनि कुरा छ। त्यही भएर अमेरिकी भिसाका लागि आवेदन दिएका थियौँ। तर दुर्भाग्यवश त्यो अस्वीकृत भयो।"
तर अमेरिकी भूमिमा अहिलेसम्म क्यारेबियन प्रीमीअर लीगका खेल हुने वा नहुने भन्ने चाहिँ निर्णय भइसकेको छैन।
लामिछानेको टोली बार्बेडस ट्राइडन्ट्स सन् २०१४ को क्यारेबियन लीगको विजेता टोली हो।
उक्त टोली वेस्ट इन्डीजको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नेतृत्व गरिरहेका जेसन होल्डरको नेतृत्वमा खेल्छ। – बीबीसी नेपाली सेवा